समाचार - सौर्य उर्जा प्रणाली आगो र ब्लास्ट रूफटप पृथक स्विच
सौर्य उर्जा प्रणाली आगो र ब्लास्ट रूफटप पृथक स्विच
गएको हप्तामा न्यु साउथ वेल्समा आगलागीका धेरै घटनाहरू भएका छन् वा सोलार पावर प्रणालीहरू सहित - र कम्तिमा दुईवटा छत पृथक स्विचको कारणले भएको हो भन्ने सोचाइ छ।
हिजो, फायर एण्ड रेस्क्यु न्यू साउथ वेल्सले यो रिपोर्ट गरे कि यो मध्य केन्द्रीय तटमा रहेको वाउंगाराह स्थित एउटा घरमा भएको थियो। ट्रिपल-शून्य कलरले घरको छानाबाट धुवाँ छोडेको खबर पाएपछि।
"ह्यामिलिन टेरेस र डोयलसन फायर स्टेशनका फायर फाइटरहरू केही समय पछि घटनास्थलमा पुगे र आगोलाई छिटो पक्रन र यो अझ फैलिएको नभएको निश्चित गर्न सके," फायर एण्ड रेस्क्युले भने। "एफआरएनएसडब्ल्यूको अग्नि अनुसन्धान र अनुसन्धान युनिटले हाल आगोको कारण स्थापना गर्न काम गरिरहेको छ जुन विश्वास गरिन्छ कि यो अलगाव स्विचमा सुरु भएको छ।"
डिसेम्बर On० मा, घरको छत सौर प्यानलहरू धुम्रपान गरिरहेको खबर पाएपछि बार बिचको न्यूकासल उपनगरमा अग्निशामक र प्रहरीलाई ठेगानामा बोलाइएको थियो। फेरि, कुनै ठूलो संरचनात्मक क्षति हुन अघि आगोलाई बाहिर निकालियो। सम्भावित कारण उल्लेख गरिएको थिएन।
अग्नि र उद्धार एनएसडब्ल्यू गत वर्ष भनिएको सौर प्यानल सम्बन्धित आगलागी विगत years बर्षमा पाँच गुणा बढेको थियो, तर कुनै संख्या प्रदान गरेन। न्यु साउथ वेल्समा 600००,००० भन्दा बढी सौर्य उर्जा प्रणाली स्थापना गरिएको छ, र जहाँ जहाँ व्यापक विद्युतीय उपकरणहरू संलग्न छन् त्यहाँ घटनाहरू हुनेछन् - तर सुधारको लागि ठाउँ छ भने यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन।
एफआरएनएसडब्ल्यूले पहिले उल्लेख गरिसकेको छ कि पृथक स्विचले राज्यमा सौर्य उर्जा प्रणालीको आगलागी आधा जति गर्दछ। जबकि रूफटप ईसोलेटर्सको अनुपात अपराधी थिएन ???? t उल्लेख गरिएको छ, यसको धेरै जसो सम्भवतः ती समस्याग्रस्त उपकरणहरूको ट्र्याक रेकर्ड दिइयो।
एक रूफटप डीसी पृथक स्विच मैन्युअल रूपले संचालित स्विच हो जुन सौर प्यानल एर्रेको छेउमा स्थापित छ र एरिए र सौर इन्भर्टर बीचमा डीसी वर्तमान सक्षम गर्दछ। विडंबना, यो एक अतिरिक्त सुरक्षा संयन्त्रको रूपमा लक्षित थियो र अष्ट्रेलियामा सबै सौर्य ऊर्जा प्रणालीहरूको लागि यो एक आवश्यकता हो। तर हामी केवल एक मात्र यस्तो देश हौ जुन उनीहरूको प्रयोगको लागि आवश्यक छ।
धेरै सौर संस्थापकहरूले रूफटप डीसी आइसोलेटर स्विच स्थापना गर्नु अस्वीकार गर्दछन् र अष्ट्रेलियाली मानकहरूबाट आवश्यकता हटाइने चालहरू छन् - र त्यो चाँडै आउँदैन। भित्ता माउन्ट isolators को साथ दूर गर्न एक पुश पनि छ; सौर इनभर्टर भित्र एक isolator समावेशको सट्टा।
ती सुधार गर्न सकिन्छ जो बनाउन सकिन्छ - अर्को मालिक हो उनीहरूको प्रणाली जाँच गरिएको।
राम्रो गुणस्तरको DC आइसोलेटर स्विचहरू राम्रोसँग स्थापना गरिएको छ र एक कफनद्वारा प्रभावी रूपमा सुरक्षित गरिएको छ सामान्यतया सुरक्षित छन्। एक कफन अर्को आवश्यकता हो जुन केही समयको लागि भएको थियो र हिजोको घटनामा आइसोलेटर स्विचमा त्यस्तो छैन जस्तो देखिन्छ। सायद स्थापनाले आवश्यकतालाई पूर्व निर्धारित गर्यो, तर सेटअप सामान्यतया अलि डज लाग्यो।
राम्रो सौर स्थापनाकर्ता छनौट गर्नको लागि आगो सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण कारण हो। तर कम्पोनेन्ट र स्थापना गुणको पर्वाह नगरी र रूफटप डीसी आईसोलेटर स्विच र सौर उर्जा प्रणालीका अन्य कम्पोनेन्टहरूले धेरै वर्षसम्म सहनु पर्छ, हरेक केही वर्षमा निरीक्षण र प्रणाली परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सन् २०० 2008 मा सानो अफ-ग्रिड पीभी प्रणालीलाई सँगै राख्नको लागि कम्पोनेन्टहरू खरीद गरेपछि माइकलले सौर्य ऊर्जा बग समात्यो। उनले त्यसबेलादेखि अष्ट्रेलिया र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा समाचारहरूको बारेमा रिपोर्ट गरिरहेका छन्।
जे भए पनि, किन उनीहरूले बेसी मूर्खता लगाए कि डीसी पृथककर्ताहरूलाई छानामा राख्नुहोस्, जसले उनीहरूलाई समस्या निम्त्याउँदछ, होइन त?
यो थोरै पानी जस्तो तापक्रमबाट तातो पानीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, लिओनोनेला प्रजनन र फैलाउन तातो पानी प्रणालीको आवश्यकता जस्तै हो।
वास्तवमा कहिल्यै बुझ्न सकिनँ कि DC को पृथक छत प्यानलमा हुनु पर्छ। कुनै पनि कारणको लागि प्यानलहरूलाई अलग गर्न औसत प्रयोगकर्ता एक भर्या up माथि चढ्दैन। पृथककर्ताहरू सजिलो पहुँच भित्र जमीन स्तरमा हुनुपर्छ।
मसँग solar सौर प्रणालीहरू छन्। पहिलो एक २०११ मा स्थापित भयो। प्यानलमा कुनै DC DC isolator छैन तर इन्भर्टर पछाडि त्यहाँ DC DC isolator छ।
तेस्रो प्रणाली २०१ 2018 मा स्थापना गरिएको थियो, यसमा छाना प्यानलहरूमा डीसी पृथक छ र साथै इन्भर्टर (डीसी आइसोलेटरहरूको एक डबल सेट) पछाडि रहेको छ।
कफनले सूर्यलाई डीसी पृथक स्विचमा राख्दछ जसले यसलाई धेरै तातो हुन रोक्न मद्दत गर्दछ र यूभी गिरावट रोक्दछ। यो पनि वर्षाको सबैभन्दा खराब राख्छ।
ADELS NL1 Series DC Isolator स्विच १-२० किलोवाट आवासीय वा व्यावसायिक फोटोभोल्टिक प्रणालीमा लागू हुन्छ, फोटोभोल्टेज मोड्युलहरू र इन्भर्टरहरू बीच राखिन्छ। आर्सेनिंग समय 8ms भन्दा कम छ, जसले सौर्य प्रणालीलाई अधिक सुरक्षित राख्छ। यसको स्थिरता र लामो सेवा जीवन सुनिश्चित गर्न, हाम्रा उत्पादनहरू अधिकतम गुणवत्ताको साथ कम्पोनेन्टहरूद्वारा बनाइन्छ। अधिकतम भोल्टेज १२००VDC सम्म छ। यो समान उत्पादनहरू बीच एक सुरक्षित नेतृत्व होल्ड।
पोष्ट समय: जनवरी-१२-२२१